बास्तबमा क्रिसमस पर्व इसाईहरुको पर्व होइन ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
बास्तबमा क्रिसमस पर्व इसाईहरुको पर्व होइन !
९ पुष २०७६, बुधबार १०:३९
क्रिसमस पर्व हरेक वर्ष ईशा मसीहको जन्म दिवसको रुप्मा मनाउने गरिन्छ ! महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ईसा मसीहको जन्म कहिले भएको थियो ? यो कुरा पूर्ण रुपले स्पष्ट छैन ! जहाँ सम्म कि बाईबलमा पनि ईसा मसीहको जन्मको तारिखको कुनै पुष्टि गरिएको छैन ! बाइबलमा कहिँ पनि इशा मसिहको जन्म दिन मान्ने बारे केही कतै पनि लेखिएको छैन ! यस्तो अवस्थामा आखिर २५ डिसेम्बरकै दिन ईसा मसीहको जन्मको तारिख किन मानियो, सम्पूर्ण विश्वमा केवल यही दिन किन क्रिसमस मनाइन्छ ? जिसस को जन्मको वास्तविक तारिकको बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन !
जिसस को जन्मको वास्तविक तिथी तथा समयको बारेमा कहिं पनि लेखिएको छैन ! यहाँ सम्मकि बाइबलमा पनि जिसस को जन्मको तारिखको बारेमा भनिएको छैन ! रोममा ३०० एडि पछि मात्र रोमन क्याथोलिक चर्चले क्रिसमस पर्व मनाउन थालेको इतिहास छ ! त्यो समयमा पादरी बाहेक बाइबल पढ्ने सर्ब साधरणलाई जीउँदै जलाएको इतिहास छ ! रोमको इतिहासमा २५ डिसेम्बरकै दिन सुर्य देबताको पुजा गरिन्थ्यो ! रोम ईशाइ देस भएपछि २५ डिसेम्बरलाई ईशा मसीहको जन्मको दिन भनेर बनाइयो !
इशा मसिह जन्मेको ३०० बर्ष पछि रोमन क्याथोलिक चर्चले सुरु गरेको क्रिसमस पर्वको देखासिकि गर्दै अहिले ९०% इशाइ धर्मावलम्बी ले यो पर्व मान्छ्न ! बिश्वमा2अर्ब बढी इशाइ धर्मावलम्बी रहेको बताइन्छ ! नेपालमा ४० लाख भन्दा बढी रहेको बताइन्छ !
प्रकाशित मिति: ९ पुष २०७६, बुधबार १०:३९
ठोरीको अयोध्यापुरीमा प्रमको चासो : वडाध्यक्षसँग टेलिफोन संवाद, नगर प्रमुखसहितलाई काठमाण्डौ बोलाइयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा चासो अगाडि बढाएका छन्। उनले शुक्रबार माडी नगरपालिका-९ का
राधा-कृष्णको कारण आज पनि यी गाउँमा वैवाहिक सम्बन्ध बन्देज
मानिसको सूष्टिसँगै उनिहरुले बनाएका कला कृति र सामाजिक परम्परा, नितिनियम कानुन अहिलेका पुस्ताले अझै अगाल्दै
गाउँप्रमुखले गरे निः शुल्क घरको साथमा पैसाको अफर
अहिलेको बर्तमान समयमा कोरोना भाइरसको माहामारीको कारण विश्वमुलुक नै चपेटामा परेको छ । कोरोनाको रोकथाम
कञ्चनपुरमा दुई टाउको चार आँखा भएको अनौठो बाच्छी जन्मियो
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुरमा जन्मियो ४ आँखा २ टाउको भएको अदभुत बाच्छी जन्मिएको छ। जिल्लाको
टिकटक र विच्याटमाथिको प्रतिबन्ध महत्वपूर्ण कुरा होइन : अमेरिकी विज्ञहरु